Wararkii ugu dambeeyey xiisad ka taagan Beled-Xaawo & Mandheera. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu dambeeyey xiisad ka taagan Beled-Xaawo & Mandheera.
Wararkii ugu dambeeyey xiisad ka taagan Beled-Xaawo & Mandheera.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in xiisad dagaal ay ka taagan tahay degmooyinka Beled-Xaawo iyo Mandheera,taas oo u dhaxeeysa Cidamada ay dhawaan dowladda Soomaaliya geysay Beled-Xaawo iyo kuwa Maamulka Jubbaland.Ciidamada Jubbland oo uu hoggaaminayo Wasiirka Amniga Maamulkaas Cabdi Rashiid Xasan Cabdi Nuur (Janan) ayaa waxaa la sheegay in fariisin ka sameysteen Magaalada Mandheera EE Dalka Kenya,isla markaana ay halkaasi ku ilaalinayaan Cabdi Rashiid Janan.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya ay isku aruur sanayaan xadka labada dal,waxaana laga cabsi qabaa in uu dagaal dhexmaro Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland.
Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland Cabdi Rashiid Xasan Cabdi Nuur (Janan) oo dowladda Soomaaliya ay soo saartey waaran lagu soo xiraayo ayaa waxaa uu degan yahay Hotel ku yaalla Magaalada Mandheera,waxaana jirta cabsi ku aadan in Ciidamada Dowladda ay Hotelka ku weeraraan.
Dadka ku sugan Magaalooyinka Beled-Xaawo iyo Mandheera ayaa waxaa ay sheegayaan in ay dareemayaan cabsi badan oo ku aadan in uu dhaco dagaal u dhaxeeya Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland,waxana xusd mudan in Xaafadaha qaar ee Beled-Xaawo in laga barakacay.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey Kenya waxaa ay ugu eedeysay inay amaan gelineyso Cabdi Rashiid Janan,sidoo kale Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee dhinaca ammaanka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji uu shalay sheegay in hadii Kenya ay fargelinta ka deyn weyso ay ka wado gobolka Gedo in Ciidamada Dowladda kasoo casheyn doonaan Magaalada Nairobi.
Previous articleAl shabaab Oo Weerar Ka Geysatey Gudaha Dalka Kenya.
Next articleMadaafiic Lagu Garaacay Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan.